प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीज्यू कतिवटा विवाह गर्‍यो भने सम्मान पाइन्छ ?
ARCHIVE, POLITICS » प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीज्यू कतिवटा विवाह गर्‍यो भने सम्मान पाइन्छ ?
काठमाडौँ - प्रकाश दाहाल ‘प्रबल जनसेवा श्री’ पाउने सुचीमा रहेको र पछि विवाद भएपछि उनले उक्त पदक लिन्न भन्ने घोषणा गरेपछि अहिले सर्वत्र यो विषय चर्चामा छ । यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहाललाई ‘प्रबल जनसेवा श्री’ पदक दिने निर्णयको आलोचना गर्दै कडा व्यंग्य गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्या सुन्दर शाक्य बिजयी भएपछि आयोजना भएको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सोधे – ‘प्रधानमन्त्रीज्यू कतिवटा विवाह गर्‍यो भने सम्मान पाइन्छ ?’ प्रचण्डलाई व्यंग्य गर्दै उनले भने ‘यो देशमा सम्मान गर्ने कांग्रेस र माओवादी बाहेक कोही छैन ? सम्मानमा शरम व्यक्त गर्नुपर्ने । आफ्ना गुरिल्लालाई सम्मान । प्रधानमन्त्रीज्यू कतिवटा विवाह गर्‍यो भने सम्मान पाइन्छ ?’सार्वजनिक पदमा बसेपछि मर्यादा राख्नुस् । छोरालाई पुल्लपुल्याउनुस् तर यो त राज्यको ढुकटी र राज्यको तक्मा पदकको अपमान हो। म सोध्न चाहान्छु प्रधानमन्त्रीज्यू के तपाईँको छोरा साँच्चै महान सेवासेवी हुन् ? जसले देशका लागि के गरे ?’ ओलीले भने ।